I-FLC Sea Tower Luxury Safe Covid - I-Airbnb
I-FLC Sea Tower Luxury Safe Covid
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguĐịnh
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uĐịnh iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-FLC Sea Tower isembindini kwaye yenye yezona ndawo zintle kwisixeko saseQui Nhon. I-FLC Sea tower ngumdibaniso ophezulu we-condotel onomgangatho weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-An Duong Vuong Avenue. Indawo ekhethekileyo ekuyo indawo ekufanele kufikelelwe kuyo xa ufika kwisixeko esihle saseQui Nhon.
Kukho iindawo zikawonke-wonke ezifikelela imigangatho yeflethi okanye indlu ekwicomplex. I-FLC Sea Tower ngokuqinisekileyo iza kukwanelisa xa ufika apha. Ukwamkela wena luvuyo, ulonwabo kunye nomsebenzi wethu.
Iinqaba ezimbini ezinemigangatho eyi-30 eziyilwe ngendlela esemagqabini yaseYurophu, i-100% yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezijonge ulwandle. I-FLC Sea Tower izele yindawo yokuzisa ubutofotofo kunye nobulula kuwe: indawo yegumbi lokulala (1 king size 2m1 okanye 2 Twin 1m8), ikhitshi, ifriji kunye nezixhobo zasekhitshini, itafile yokutyela, i-TV edityaniswe nge-intanethi kunye nesofa etofotofo, indawo yokuhlambela enebhafu, ikuncede wonwabele ubunewunewu nobutofotofo xa ufika apha. Ukongezelela, ibhalkhoni enamagumbi aliqela ineetafile nezitulo ukuze uhlale uze uphumle, ufunde iincwadi uze udibane namaza, ungene kwindawo entle yesixeko saseQui Nhon.
Ungaya kwiindawo ezidumileyo kwisixeko saseQui Nhon ezifana nesikhumbuzo seNuyen Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tat Tath, indawo yabakhenkethi yaseGhenh Rang, kwiYunivesithi iQuy Nhon. Ukuba ungumntu othanda ukutya, yiya esitratweni sokutya e-Qui Nhon kwimizuzu eyi-3 nje nge-tram, ulwandle oludumileyo lwe-Xuanuanuanuu, iVietnam - Ukutya kwaseJapan, ikhefi, iBarclub ezantsi kwesakhiwo ohlala kuso., ngokukodwa, andizazi ukuba uyakuthanda ukutya kwaseKorea, umgangatho wesibini wesakhiwo yindawo yokutyela kwaye inkonzo ilungile nyhani... Ngokomgama ukuya kwiindawo ezidumileyo ezikwisitrato esiyi-1km, iFLC ngokuqinisekileyo yiFLC. Inqaba yaselwandle iza kuba yindawo ekufanele uye kuyo.
+ Itreyini idibana ngqo nolwandle iQuy Nhon 100m
+ Isitrato sokutya
esiyi-500M + Ghenh Rang indawo yabakhenkethi 500m
+ IYunivesithi iQuy Nhon 400m
+ indawo yabakhenkethi, Eo Gio 25km
Umbuki zindwendwe ngu- Định
Ukuxhasa nokulungela ukukunceda ngalo lonke ixesha ngumsebenzi wam kodwa ndikuthanda kakhulu.
Xa ufika kwi-FLC Sea Tower Quy Nhon, nceda undifowunele kwinombolo yefowuni endiyifakileyo. Kodwa ngokuqhelekileyo ndiza kukufowunela kusuku oluyi-1 ngaphambi kokuba ubhabhe uye eQuy Nhon. Ndiza kuhlala ndincedisa xa uyidinga. Apha ndinaso nesithuthuthu esizenzekelayo. Ukuba uyayidinga, ndiza kukuvumela ukuba uyiqeshe ngexabiso elifanelekileyo.
Ndiza kukuvuyela ukuninceda nonke.
Xa ufika kwi-FLC Sea Tower Quy Nhon, nceda undifowunele kwinombolo yefowuni endiy…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Thành phố Qui Nhơn